Threats to expel Mugabe from Zanu PF mounts – The Zimbabwe Mail
HomeMainThreats to expel Mugabe from Zanu PF mounts
March 18, 2018 Staff Reporter Main, Zimbabwe 0
Zanu-PF secretary for Legal Affairs, Paul Mangwana, said in an interview that the former President risked losing Zanu-PF membership, constitutional privileges and respect for dabbling in opposition politics.
Mangwana said the national constitution does not allow a former Head of State to dabble in active politics.
Mangwana said Mr Mugabe risked losing membership and the privileges he was enjoying.
Asked if Mr Mugabe was not allowed to exercise his right to freedom of association by supporting a political party of his choice, Mangwana said the Constitution had to be read holistically.
Zanu-PF secretary for information and publicity Simon Khaya Moyo said President Mnangagwa had made a pronouncement regarding the conduct of Mr Mugabe.
“A few days ago, His Excellency President Mnangagwa was clear regarding that issue,” said Khaya Moyo, who is also acting Minister of Media, Information and Broadcasting Services.
Zanu-PF Matabeleland North provincial chairperson, Richard Moyo, said Mr Mugabe had destroyed the 37 year legacy that he had built by hobnobbing with opposition politics.
Midlands provincial chairperson Daniel Mackenzie Ncube said Mr Mugabe should be fired from the party for making “reckless statements.”
Masvingo provincial chairperson Ezra Chadzamira said the province was surprised by Mr Mugabe’s conduct.